Senator Ilyaas oo jawaab ka soo saaray tallaabadii looga reebay liiska Aqalka Sare - Allbanaadir Media
Home Xogta Dahsoon Senator Ilyaas oo jawaab ka soo saaray tallaabadii looga reebay liiska Aqalka...
Senator Ilyaas Cali Xasan oo ka tirsan Aqalka Sare ee baarlamanka Soomaaliya ayaa jawaab rasmi ah kasoo saaray go’aankii uu madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta-gareen uga reebay liiska musharaxiinta Aqalka Sare ee beesha Eelaay.
Kursiga Ilyaas ayaa waxaa loo sharxay inay ku tartamaan laba gabdhood oo kala ah; Ayaan Aadan Cabdullahi iyo Farxiyo Nuur Aadan oo labadaba kasoo jeeda beesha Hariin ee madaxweyne Lafta-gareen.
Hoos ka aqriso qoraalka Senator Ilyaas.
Waxay ii aheyd Sharaf in aan ugu adeegey heerka ugu sareyso ee aan awoodey guud ahaan Shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Koonfur Galbeed, kuwaas oo 4sano kahor kursiga Senator-nimo aan kumatalaayey iigu doortey 91 cod, oo ahaa codkii ugu badan ee qof Senator Soomaaliyeed ah lagu doortey.
Intii aan haayey xilla waxaan aaminsanahay in aan waxba ka hagran dalka iyo dadkii aan matalaayey, waxaana si xorriyad kujirto aan codkeyga ugu difaacaayey wixii aan u arko kolba danta Qaranka iyo Deegaankii aan mtalaayey in ay kujirto, laakiin shaki kuma jiro in ay arintaasi dhibeysey kuwa dulmiga u saaxiibka ahaa, kuwaasoo marwalba dantooda gaarka ah ka hormariya wax kasta una arka cadow cidii iyaga aan ku aragti ama mowqif aheyn.
Sida lawada ogsoonyahay Soomaaliya waxay wax kuqeybsataa Qabiil iyo Deegaan, aniguna kursiga sidaasbaa shaley la iigu doortey inaan soo galo liiska musharaxiinta Aqalka Sare utartantey, hase ahaatee qof waliba waa uu ka dheragsanyahay maanta sida ay wax udhaceen.
Waxaan u mahadnaqaayaa guud ahaan Shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka reer Koonfur Galbeed oo sidii weyneyd ay uga falceliyeen wixii uu sameeyey Maamulka Koonfur Galbeed.
Ugu dambeyntii waxaan umadda Soomaaliyeed iyo reer Koonfur Galbeed-ba u ballan qaadaayaa in aan utaagnaan doono difaacidda Dimuqraadiyadda, Qaranimada iyo Horumarka Soomaaliya.